तपाईंको ,घरमा हात्तिको प्रतिमा राख्नुको यस्को महत्व यस्तो बेग्लै छ् ।!!! – News Nepali Dainik
तपाईंको ,घरमा हात्तिको प्रतिमा राख्नुको यस्को महत्व यस्तो बेग्लै छ् ।!!!
प्रकाशित मिति: बुधबार, माघ २१, २०७७ समय: २१:०७:३६
हिन्दु धर्मालम्बीहरु हात्तिलाई पुज्ने गर्दछन् । हिन्दू मात्र होइन बौद्ध धर्ममासमेत हात्तिलाई पवित्र जीव मानिन्छ ।
यस्तै चिनियाँ वास्तु र फेंगशुई विज्ञानमा पनि हात्तिको मुर्ती, पेन्टिंग वा चित्र राख्नु शुभ मानिन्छ ।
वास्तुशास्त्र अनुसार उत्तर र दक्षिण दिशामा रातो रंगको हात्ति राखेमा समाजमा मानसम्मान र यश वृद्धि हुने मान्यता छ । यदि कार्यस्थलमा वा व्यक्तिगत यशका लागी यो उपाय गर्न चाहेमा आफू बस्ने दक्षिण दिशामा रातो हात्ति राख्नु लाभसिद्ध हुन्छ ।
यदि आफ्नो व्यवसायमा यश र प्रतिष्ठा बढाउन चाहेमा उत्तर दिशामा रातो रंगको हात्तिको प्रतिमा राख्नु पर्दछ ।
चाँदीद्धारा निर्मित हात्ति ज्योतिष एवम् वास्तु दृष्टिमा शुभ मानिन्छ । वास्तु अनुसार, चाँदी र हात्ति दुबै नकारात्मकता नष्ट गर्न र सकारात्मकता बढाउन मदद्त गर्दछ । चाँदीबाट बनेका हात्ति घर वा अफिसको टेबलमा राखेमा रोकिएको काममा गति आउँछ साथै बढुवाको योग बन्दछ ।
चाँदीको हात्ति उत्तर दिशामा राख्बनु शुभ मानिन्छ । अझ यसलाई रातो कपडामा बेरेर ढुकुटीमा राखेमा आयको स्रोत बढ्दछ ।
यदि विद्यार्थीको आफ्नो करियरमा बारम्बार आएको असफलता वा समस्या हटाउन चाहेमा पढाई कक्षमा सूड उठाएको हात्तिको प्रतिमा राखेमा शुभ परिणाम प्राप्त हुन्छ ।
Last Updated on: February 3rd, 2021 at 9:07 pm